K: Twilight over Burma
စာအုပ် တအုပ်ဖတ်တယ်ဆိုတာ..အချိန်ပေးရတဲ့အလုပ်ပါ။ page turner မဟုတ်ပဲ သိဖို့လိုလို့..ရှာစရာရှိလို့..လေ့လာဖို့ ဆိုတဲ့ စာအုပ်မျိုးဆို ပိုလို့တောင် ခက်ခဲ အချိန်ယူရမှာပါ။ အခုနောက်ပိုင်းဆို စာအုပ်တအုပ် ပြည့်ပြည့်၀၀ ပြီးအောင် မဖတ်နိုင်တာတောင် အတော်ကြာခဲ့ပြီ..။ အဲဒါကြောင့်.. အငှါးဖတ်ပေးထားသလိုမျိုး.. အချိန်တိုအတွင်းမှာ...စာတအုပ်ကို ခြုံငြုံ မိစေတဲ့..စာအုပ်စင် ကဏ္ဍတွေ..စာအုပ် အညွှန်း ဝေဖန်ချက်တွေကို ဆို.. အင်မတန် နှစ်သက်ပါသည်။ အထူးသဖြင့်..ဖတ်ပြသူက.. အစွဲကင်းကင်းနဲ့ အသေအချာ လေ့လာသုံးသပ်ပြ နိုင်ရင်ပေါ့။
ဥပမာ- ပြည်ပ မြန်မာရေဒီယိုတွေ မှာ နားထောင်ရတဲ့..ဆရာဦးအောင်ခင် ရဲ့ စာအုပ်စင် ဆို အမြဲ ဂရုစိုက် နားထောင်မိသည်။ ရှင်းလင်းပြတ်သားတဲ့ ၀ါကျတိုတိုတွေ နဲ့ ပိုင်နိုင်တဲ့ သူ့ပြောဟန်က..နားထဲကိုသာမက.. ဦးဏှောက်ထဲ ထိ တဲ့တဲ့ ရောက်တဲ့ လေသံမျိုး.. ။ ဖတ်ရတဲ့ အထဲမှာဆိုရင်.. ဧရာဝတီက.. စာအုပ်သုံးသပ်ချက် တွေ ကို ကြိုက်သည်။ ဘယ်လိုမှ ကိုယ်တိုင် လက်လှမ်းမှီမှာ မဟုတ်တဲ့..ဖတ်ဖြစ်မှာ မဟုတ်တဲ့ စာအုပ်ကြီးတွေကို.. အနှစ်ချုပ် အမြန်နည်းနဲ့ ဗဟုသုတ ရစေတာလောက်..ဘယ်မှာ တန်ဖိုးရှိတာ ရှိတော့မလဲ။ တလောက..ဧရာဝတီမှာ ပဲ ဖတ်လိုက်ရတဲ့.. အီဒစ်မီရန်တေး ပြန်ပြောပြတဲ့.. မြန်မာတိုင်းရင်းသား တယောက်ဖြစ်တဲ့.. Pascal KhooThwe ရဲ့ the Land of Green Ghosts: A Burmese Odyssey ( သရဲစိမ်းတို့ရဲ့မြေ) ဆိုတဲ့ စာအုပ်ဆို ကိုယ်တိုင် အပြည့်အစုံ ဖတ်ချင်နေခဲ့တဲ့ စာအုပ်တအုပ် ဖြစ်သွားသည်။ အသိတယောက်ကလည်း ညွှန်းထားသေးသည် ဆိုတော့။ ခုထိတော့.. ဘယ်နေမှန်း မသိသေးပေ။
နောက်- ကိုအောင်သူငြိမ်း ဖတ်ပြနေတဲ့.. သန့်မြင့်ဦး ရဲ့ ပျောက်ဆုံးသွားတဲ့ ခြေရာတွေနဲ့မြစ် ကိုလည်း..ခုတလော စိတ်ဝင်တစား စောင့်ဖတ်နေမိသည်။ အဲဒီစာအုပ်ကို.. ဆရာမ ဒေါ်ကြည်မေကောင်း ဝေဖန် ကတည်းက..စိတ်ဝင်စားနေခဲ့တာ။ နောက်ပြီး.. မြန်မာဘုရင်တွေ ရဲ့ စိတ်နေ စိတ်ထား.. တွေကို ယထျဘူတ ကျကျ သုံးသပ် ထားတာကိုလည်း.. သိချင်နေခဲ့တာ။ အိမ်မှာ ဆို.. မြန်မာ့သမိုင်းကို စိတ်ဝင်စားပြီး.. ကုန်းဘောင် စာအုပ်တွေ မှန်သမျှ မပြတ်လေ့လာတဲ့..ဖခင် နဲ့ဆို အမြဲ ငြင်းခုံ ဆွေးနွေးနေကျ မို့လည်း ပိုလို့ စိတ်ဝင်စားနေခဲ့မိတာ။
အဲဒါနဲ့ ပြည်ထောင်စုနေ့မှာ.. ဘာရယ်လို့တော့မဟုတ်.. လွန်ခဲ့တဲ့ ၈ နှစ်လောက်က.. ဖခင်ရဲ့ စာအုပ်စင် အတွက်..တကူးတက ၀ယ်သွားပေး ဖြစ်ခဲ့တဲ့.. Twilight Over Burma ဆိုတဲ့ စာအုပ်ကလေးကို ပြန်ညွှန်းချင်စိတ် ပေါက်လာတယ်။ ဖတ်ဖြစ်ခဲ့တာလည်း ကြာပီ ဆိုတော့..မရေမရာ ရေးတေးတေး အညွှန်းလေး ပဲ ဖြစ်မှာပါ။
ပြည်ထောင်စုနေ့ အမှတ်တရပါ။ (အကြောင်းအချက် တချို့နှင့် ပုံများကို ဤနေရာမှ ရယူပါသည်။ )
ဆက်စပ် သတင်း- ညောင်ရွှေဟော်နန်း နှင့် သီပေါဟော်
Labels: Books , Burma History , Burma story , Reviews
မျှဝေပေးတာ ကျေးဇူးပါ အမ။ ရှာလို့ ရရင် ၀ယ်ဖတ်ကြည့်ပါအုန်းမယ် ( ကြိုးစားပမ်းစား)
နောက်နေ့မှ Bankstown Libraryမှာသွားရှာမယ်
အစ်မရေးထားတာ ဖတ်လိုက်တော့ ရှာဖတ်စရာ မလိုတော့ဘူးပေါ့.:)
စိတ်ဝင်စားဖို့ ကောင်းတယ် မကေ။
ဟနက မောရှမ်း(ရှမ်းကြီး)မို့လို့ ရှမ်းတွေနဲ့ပတ်သက်တာ
အကုန် စိတ်ဝင်စားတာ။ ဒီသမိုင်းကို မသိခဲ့ဘူး။
အဲဒီ စာအုပ်ရှာ ဖတ်ဦးမယ်။
ကျေးဇူးမကေ... ဒါကိုဖတ်လိုက်တော့ တိုင်းရင်းသားစည်းလုံးညီညွတ်ရေး ဆိုတာ ပါးစပ်ကအော် သီချင်းတွေဆို ဆိုင်ဘုတ်တွေတပ်ရုံနဲ့ မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာပါပဲ...
အဲ..အစ်မကေရေ တိုက်ဆိုင်လိုက်ပုံများ ...
ခုလေးတင်ညီမတို့တွေ ဘလောဂ့်ရေးတဲ့ မောင်လေး၊ညီမလေးတွေနဲ့တွေ့ပြီးပြန်လာတာ၊သူတို့နဲ့ပဲ
ပြန်လဲလာရော အစ်မဆီမှာ တွေ့တာပဲ..။
ကိုယောဟန်အောင်ဆီမှာ ဖတ်ခဲ့ တယ်
ခု တစ်ချို့ တစ်စ ထပ် ဖတ်ရတာ ကောင်းလိုက် တာ
အဲဒီ စာ အုပ် ဘယ်နား ရနိုင်မလဲ မသိ ဘူး နော်..
စာအုပ်မိတ်ဆက်ရေးတဲ့ မိတ်ဆွေတယောက် တွေ့သွားတယ်။ အားပေးပါတယ်။ ဆက်လုပ်ပါဦး။ ကျန်တဲ့သူအတွက်လည်း ကောင်းပါတယ်။
အခုလို စာအုပ်ကောင်းတစ်အုပ်ကို မိတ်ဆက်ပေးတာ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ လွန်ခဲ့တဲ့ ၁၀-နှစ်ကျော်လောက်က ကျွန်တော် ထိုင်းနိုင်ငံကို Stay ရှောင်စဉ်က အခန်းငယ်လေးတစ်ခုထဲမှာ “ရေဒီယိုမေဆွိ” နားထောင်းရင်း ဖတ်ခဲ့ဖူးတာပြန် သတိရမိတယ်။ အနောက်နိုင်ငံသူတစ်ဦးကို မြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှု etiquette တွေ (အမှန်တော့ ရှမ်းယဉ်ကျေးမှုပေါ့နော်) သင်ပေးတာကို ဂုဏ်ယူမိတယ်။ တရုတ်ပြည်ကို အလည်သွားတော့ ကွန်မြူနစ်ကို သဘောမကျတဲ့ စပ်ကြာဆိုင်က “ဘာပစ္စည်းမှ မ၀ယ်ရဘူးလို့” တားတာကိုလည်း မှတ်မိပါသေးတယ်။ ပြည်ထောင်စုကို ထောက်ခံတဲ့, အမျိုးသားရေးစိတ်ဓာတ်ရှိတဲ့ တိုင်းရင်းသား ခေါင်းဆောင်တစ်ဦး ဆုံးရှုံးခဲ့တာကို ၀မ်းနည်းမိခဲ့တယ်။ နောက်ပြန်ဖတ်ချင်လို့ ရှာတဲ့အခါ မရတော့ပါဘူး။ မကေ… အချိန်ရလို့ ဘာသာပြန်ပြီးတင် ပေးနိုင်ရင်တော့ ပြန်ပေးစေချင်ပါတယ်။
သူတို့လို ထင်ရှားတဲ့ ခေါင်းဆောင်တွေတောင် လူမသိ သူမသိ ပျောက်ကွယ်ခဲ့ရတယ် ဆိုရင်..ခေတ်အဆက်ဆက်....သူရဲကောင်းတွေ ဘယ်လောက်တောင် ပျောက်ခဲ့ရသလဲဆိုတာ မတွေးရဲအောင်ပဲ စိတ်တော်တော် မကောင်းဘူး။။
ပို့စ်လေးမှာ ပြည့်ပြည့်စုံစုံ ပြောပြပေးတာ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
၀ိမုတိံဘလော့မှာ သျှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်း သီပေါစော်ဘွား စ၀်ကြာဆိုင်၏ ဟော်နန်းကိုလည်း စစ်အာဏာပိုင်များ က မည်သူမှမ၀င်ရ အမိန့်ဖြင့် ချိတ်ပိတ်လိုက်ပြီဖြစ်ကြောင်း ဒေသခံများကပြောသည်လို့ ပြောထားတယ်..
တန်ဘိုးရှိတဲ့ မျှဝေပေးမှုတွက် ကျေးဇူး မကေ
စာအုပ်ညွှန်းကောင်းတဲ့လူဆိုတာ စေတနာလဲပါ၊ စိတ်ဝင်စားအောင်လဲ Highlight လုပ်တတ်၊ သိစရာ အချက်အလက်လေးတွေလဲ မျှတတ်တာမျိုးမှပါ။
အဲဒီလိုဆိုရင် စာညွှန်းဖတ်ပြီးတာနဲ့ တခါတည်း ဖတ်ချင် သွားတာမျိုးလေ။
အခု ဒီပို့စ် ဖတ်ပြီးတော့ ဖတ်ချင်လွန်းလို့ စာအုပ်ဘယ်မှာလဲ ပေး.. အခု ပေး။ :))
မကေအညွှန်းလေးဖတ်ပြီး ဖတ်ချင်စိတ် ပေါက်လာပြီ။
အဖိုးတန်တဲ့ စာအုပ်ကောင်းတစ်အုပ်ကို ညွှန်းဖော်ပေးတဲ့
အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ် မကေရေ...
အဲလို ဘ၀မျိုးတွေ ဗမာပြည် သမိုင်းမှာ ဘယ်လောက်များခဲ့ပြီလဲ ဆိုတာ ဘယ်သူမှ သေချာ မသိနိုင်ပါဘူးလေ...
လင်း- မနော်- မချိုသင်းရေ-
တကယ်ဖတ်ချင်တာဆိုရင်တော့.. အမေဇုန်မှာပဲ ရတော့မယ်ထင်တယ်။ စင်တွေပေါ်မှာတော့..မရှိလောက်တော့ဘူး။
လင်းဒီပ- ဟုတ်တယ်လေ..အဲဒါကြောင့်..အမလဲ စာအုပ်အညွှန်း..အကျဉ်းချုပ်..သုံးသပ်ဝေဖန်ချက်တွေ ဆို တမင်လိုက်ရှာဖတ်ဖြစ်တာ။ ရေသာခိုနည်းတမျိုးပေါ့။း)
ပီတိ- တိုင်းရင်းသား စည်းလုံးညီညွှတ်ရေးလား..အင်း.. အော်လို့တော့ကောင်းသားပဲ..
ညီမကြီးမကြေးမုံရေ- ဟုတ်ကဲ့လား..တိုက်ဆိုင်လှချည့်။ ဒါဆို ကလေးတွေနဲ့ လက်ဆင့်ကမ်း မျှဖတ်ကြပေါ့။
မမသီရိ- ဘယ်စာအုပ်ကိုပြောတာလဲမသိ- သန့်မြင့်ဦးစာအုပ်ကတော့..သစ်သေးတယ်..စင်ပေါ်မှာ ရှာရင်ရနိုင်မယ်။
ကိုယောဟန်အောင်- ခုလို အားပေးတဲ့အတွက်.. ကျေးဇူးတကယ်တင်မိပါတယ်။ ဦးအောင်သူငြိမ်းရဲ့ စာအုပ်လက်ဆောင်ကဏ္ဍကိုလည်း ဦးအောင်ခင်လို စောင့်နားထောင်ကြည့်ပါ့မယ်..ခုတော့..မျက်စိနဲ့ပဲ ဖတ်ဖြစ်တယ်။
ကိုဧရာ- ဒါဆို တူနေပြီပဲ..ကျမ ဒီစာအုပ်ကိုဝယ်တာလည်း အတိအကျပြောရင်..လွန်ခဲ့တဲ့ ၁၀ နှစ် ဘန်ကောက်မြို့လယ်ခေါင်က..Asia Bookstore မှာ Who Kill AUng San နဲ့အတူ ၀ယ်ခဲ့တာ..ဘတ်၃၀၀ လားပေးရတယ်။ ဘာသာတော့မပြန်နိုင်တော့ဘူးလေ။ နောက်..စာအုပ်ကလဲ ကျမနဲ့အတူ ရှိမနေဘူး..ခုတောင် တချို့အချက်တွေ..မသေချာလို့..ဥပမာ..ဦးနေ၀င်းနဲ့တွေ့တဲ့အခန်းက..အဖွင့်လား..အထဲတနေရာမှာလား..သိပ်မသေချာဘူး။
ညီမဆုမွန်- ပြောတာနဲ့..၀ိမုတ္တိမှာသွားရှာပြီး အောက်မှာ လင့်ပေးထားလိုက်တယ်..ကျေးဇူး..သတင်းထောက်မလေးရေ- ( တော်တယ်)း)
မလေးရေ- အမြဲသတိရနေတယ်..ခုလို မှတ်ချက်လာပေးတာ ကျေးဇူးနော်။
မချိုသင်းနဲ့မီယာ..ဖတ်ချင်- ရအောင်ရှာဖတ်း)
ကိုဆောင်း နဲ့ ကိုအောင်သာငယ်- မပျက်မကွက် မှတ်ချက်ပေးတဲ့အတွက်.. ကျေးဇူး။ ကိုအောင်သာငယ်ရေ-- ဟုတ်တယ်..လူကောင်းတွေ ပြုန်းတီး နေစေတဲ့..အခြေအနေတွေက..တကယ်တွေးကြည့်ရင်..စိုးရိမ်ရေမှတ်ကို ကျော်နေပြီ။
တိုးတိုးတိတ်တိတ်လေး လာလာဖတ်ဖြစ်နေတယ်ဗျ. :)
ခုတော့လည်း ကော်မန့်ရေးရင် ကျယ်ကျယ်လောင်လောင်ကြီးကို အော်ဖတ်သွားပြီဗျာ...
ဟော်နန်းတွေအကြောင်း ကျွန်တော်အရမ်းသိချင်နေတာ. ခုဒီစာအုပ်လေးက လမ်းစတစ်ခုဖြစ်သွားပြီ...
ဟိုးတလောတုန်းကလည်း ဗမာ့စောင်းဆိုတဲ့ ပို့စ်လေးကို သေသေချာချာ လာဖတ်သွားခဲ့သေးတယ် ဆိုတာ အခုမှ ပြောပြလိုက်တော့မယ်. :)
ကျွန်တော့်အစ်မ ပညာတွေ ဒီ့ထက် အများကြီးတတ်ပြီး တိုင်းကျိုးပြည်ပြုနိုင်ပါစေဗျာ...
အမှတ် မမှားရင် ဒီစာအုပ်ကို လက်ဖဝါးလောက် ဆိုဒ်နဲ့ သံခိပ် လုပ်ထားတဲ့ "မျှော်လေတိုင်း မှိုင်းရီ" ဆိုပြီး ဘာသာပြန် ထားတာ ၂၀၀၀ ခုနှစ်လောက်က လွတ်မြောက်နယ်မြေ တခုမှာ ဖတ်ခဲ့ရ ဖူးတယ်၊ အီးဒစ် မရန်တီးက ဒူကဘာ တို့နဲ့ တမြို့ထဲ နေသူ မြန်မာ့အရေး စိတ်ဝင်စားသူ အမေရိကန် စာရေး ဆရာမပါ။ မကေ... စာအုပ် သုံးသပ်ချက်တွေ များများ ရေးနိုင်ပါစေ ညွှန်ပြနိုင်ပါစေ ကြိုဆိုပါတယ် ဗျားးးးးးးးးးးးးးးးး
ရန်- ကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်။ စိတ်ဝင်စားနေတဲ့တခု အတွက် လမ်းစရသွားတာကိုလည်း ၀မ်းသာနေမိတယ်။ စာအုပ်ညွှန်းရ ကျိုးနပ်သွားပါတယ်။ စာဖတ်သူ မိတ်ဆွေ တယောက်အဖြစ် အလေးအနက် မှတ်မိနေပါ့မယ်။း)
ဒူကဘာ- မြန်မာပြန်ကိုတော့..ကျမမသိဘူးရှင့်။ အီရစ်မရန်တေး နဲ့ နီးစပ်တယ်ဆိုတာ စိတ်ဝင်စားစရာပဲ။
ညီမ-နှင်းရေ- ကျေးဇူးနော်။ အရှေ့အလယ်ပိုင်း..အတွေ့အကြုံတွေ စောင့်ဖတ်နေပါ့မယ်။
မကေ ဒီစာပအုပ်အတွက် ကျေးဇူးပါ
အ/ရမ်းကို ကောင်းတဲ့ ဖေိာပြမှူပါ